Modem Manager GUI - USB modem များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု Linux မှ
Modem Manager GUI - USB modem များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအက်ပလီကေးရှင်း
အ လည်ပတ်မှုစနစ်များ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းကဲ့သို့ GNU / Linux များ၎င်းတို့တွင်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအလွန်ကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းများရှိပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏ analog များနှင့်တန်းတူသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။ လည်ပတ်မှုစနစ်များ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အဖြစ်ပိတ်လိုက် Windows ကို။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် Modem Manager GUIကျွန်ုပ်လက်ရှိမကြာခဏအသုံးပြုသောအလွန်ကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ပြောနိုင်ပါတယ် Modem Manager GUI တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ အသုံးပြုမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသော modem-manager (ModemManager) service (daemon) အတွက်ဂရပ်ဖစ် interface (front-end) USB modems ဆက်သွယ်မှုနှင့် အင်တာနက်ကို အပေါ် GNU / Linux Distros.
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော်ကအထူးစာအုပ်ကြီးဟုခေါ်သည့်ထုတ်ဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အခါသမယတွင်ဖြစ်သည် "Modem Manager: Linux ရှိ modem ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လျှောက်လွှာ" ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတိုးချဲ့မည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်၊ သို့သော်နည်းပညာနှင့်အမြင်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့။
Modem Manager: Linux ရှိ Modem ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခု
ကျနော်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်အကြံပြုရှိရာအခြားယခင် post ကို၏အပိုင်းအတွက် «USB အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိရိယာများအတွက်ပံ့ပိုးမှု» အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
1 Modem Manager GUI - Linux ရှိ USB modem စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပလီကေးရှင်း
1.1 Modem Manager GUI ဆိုတာဘာလဲ။
1.3.2 Ubuntu ကို
1.3.4 Arch Linux ကို
1.3.6 Mageia Linux ကို
1.3.7 တော့ openSUSE
Modem Manager GUI - Linux ရှိ USB modem စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပလီကေးရှင်း
Modem Manager GUI ဆိုတာဘာလဲ။
လောလောဆယ်နှင့်၎င်းတို့၏အတွက်၎င်း၏ developer များကိုးကား တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"GTK + ကိုအခြေခံထားသောရိုးရှင်းသောဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်၊ Modem Manager, Wader နှင့် oFono တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်ပြီး EDGE / 3G / 4G broadband modem ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊ SIM ကဒ်၏လက်ကျန်ငွေကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ များစွာသောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အဆောက်အ ဦး များအကြားမိုဘိုင်းဒေတာအသွားအလာသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်".
မိုဘိုင်း broadband ဆက်သွယ်မှုများကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း။
USSD တောင်းဆိုမှုများကို အစပြု၍ တုံ့ပြန်မှုများကိုဖတ်ပါ။
ကိရိယာအချက်အလက်ကိုကြည့်ပါ - အော်ပရေတာအမည်၊ စက်ကိရိယာ၊ IMEI, IMSI, အချက်ပြအဆင့်။
၏အထုပ် (binaries) ၏ Modem Manager GUI ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့်အသုံးအများဆုံးတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည် GNU / Linux Distros နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ, သို့သော်, ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောအတွင်းအောင်မြင်နိုင်ပါသည် တရားဝင်သို့မဟုတ်သဟဇာတ repositories က သူတို့ထဲကများစွာသော၏, ဒါရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အတူ command ကိုအမိန့် terminal သို့မဟုတ် console မှ၎င်းတို့ကိုရရှိနိုင်သည့် version ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ:
modem-manager-gui ကို install လုပ်ပါ
sudo apt-get ကို install လုပ်ပါ။ modem-manager-gui
pacman -S modem- မန်နေဂျာ-gui
ccr -S modem- မန်နေဂျာ-gui
Mageia Linux ကို
modem- မန်နေဂျာ -Gi အတွက် zypper
လက်ရှိတွင် Modem Manager GUIအဘို့အတတ်၏ 0.0.20 ဗားရှင်း အရာရုံလွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအဘို့အရရှိနိုင်ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပါ MX Linux အရာကဖြစ်တယ် 0.0.19 ဗားရှင်း, အပြီးသတ် Pre-install လုပ်ပြီးငါ့အပေါ်မှာperfectlyုံအလုပ်လုပ်သည် ထုံးစံနှင့် optimized respin, ခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ.
ဒါ့အပြင်၎င်းရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့အလားအလာအားလုံးကိုနက်နက်နဲနဲမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်အောက်ပါ screenshots တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပါမယ် 0.0.19 ဗားရှင်း, ငါယခုငါအသုံးပြုသည်, ငါ့ကိုငါ့စီမံခန့်ခွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် Movistar Huawei E173 USB Modem အဓိကပြproblemsနာများမရှိဘဲ, အထူးသဖြင့် ဒေတာသုံးစွဲမှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြ ငါ၏အကောင်းသောအသုံးပြုမှုကိုနိုင်စေဖို့နေ့စဉ်နှင့်လစဉ် ဒေတာအစီအစဉ် အပေါ် Linux ကိုဖန်တီးထားတဲ့မူရင်းဆော့ဗ်ဝဲကိုအလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်တယ် Windows ကို.
ခ Devices Option ကိုထည့်ပါ
(ဂ) SMS စာတိုပေးပို့ပါ
US USSD စာတိုပေးပို့ချက်များ
E. Option ကိရိယာနှင့်ဆက်သွယ်မှု၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ရှာဖွေတွေ့ရှိဆက်သွယ်မှုများအတွက် F. Option ကို Scan ကို
I. စီမံခန့်ခွဲမှု option ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဂျေ ဦး စားပေး -> အပြုအမူ
K. Preferences -> SMS စာတိုများ
အယ်လ် ဦး စားပေး -> ဂရပ်ဖစ်
အမ် ဦး စားပေး -> module တွေ
N. ဦး စားပေး -> စာမျက်နှာများ
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ tool ကို, ကောင်းစွာပြီးပြည့်စုံသော များစွာသောသူတို့သည်၎င်းကိုလိုအပ်လျှင်၎င်းကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီး၎င်းသည်၎င်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Modem Manager GUI»ဘယ်ကဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ GNU / Linux Distros တွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ USB modem များအသုံးပြုမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ယူထားသော modem-manager (ModemManager) ၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဂရပ်ဖစ် interface (front-end) ၏အကျိုးသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ တစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Modem Manager GUI - USB modem များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအက်ပလီကေးရှင်း
Franco Castillo ဟုသူကပြောသည်
band, 4,7and 28 ကိုသုံးသောအာဂျင်တီးနားအတွက်မည်သည့် modem ကိုသင်အကြံပြုသနည်း။ ဖြစ်နိုင်ရင် band2နဲ့ 8 လည်းချည်နှောင်နိုင်ပါတယ်။
Franco Castillo ကိုပြန်ကြားပါ
Franco နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအာဂျင်တီးနားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသော USB modem ထုတ်ကုန်များ၏မော်ဒယ်များနှင့်ထိုခညျြအနှောနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းပြောပြနိုင်ဘူး။ ထိုနိုင်ငံမှအခြားစာဖတ်သူတစ် ဦး ကထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အောင်မြင်မှုနှင့်အတူကံကောင်းပါစေ။
Fedora 34 သည် SELinux မသန်စွမ်းမှုကိုဖယ်ရှားရန်နှင့် Wayland မှ KDE သို့ပြောင်းရန်ရည်ရွယ်သည်
သံချေး, Linux developer များနှင့်အတူသဘောတူဟန်